One Stop Business ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရှာဖွေခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရှ၏အကြီးမားဆုံး B2B စက်မှုအရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စီးပွားရေးဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသည်
၀ ယ်သူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုကြည့်ပါ
ရောင်းသူအားလုံးအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုကြည့်ပါ
စီမံကိန်း Execution န်ဆောင်မှုများ
Project Execution အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုကြည့်ပါ
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေသအလိုက်အတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအင်အား ၀ န်ဆောင်မှုများ
WorldRef မှ Talent'd ကိုစစ်ဆေးပါ
5000+ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကြီးထွားလာထံမှရောင်းချသူ 45 ကျော်
Kivu သည် သာမန်ရေကန်မဟုတ်ပေ။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များသည် ရေနေပဟေဠိများ၊ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော အန္တရာယ်များနှင့် အဖိုးတန်စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော စွမ်းရည်များ ပါဝင်သည်။ Knowable Magazine Lake Kivu မှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်သူ John Wenz သည် အာဖရိက၏ အထူးဆန်းဆုံး ရေတွင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သော ဂုဏ်သတ္တိများ အစုအပြုံလိုက် […]
ဆက်ဖတ်ရန်... အာဖရိကရေကန်အတွင်း ပုန်းအောင်းနေသည့် အန္တရာယ်မှ
တစ်ချိန်က အစွန်းအထင်းနှင့် အနာဂတ်တွင်၊ ဤပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သည် စျေးသက်သက်သာသာနှင့် ထိရောက်သောစွမ်းအင်ရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ယနေ့တောက်ပနေပါသည်။ သို့တိုင်၊ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရင်းများကြောင့် အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ဆဲဖြစ်သည်။ Adam Levy မှ လေထုရူပဗေဒပညာရှင် တီထွင်မှုတစ်ခု၏အနာဂတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ထွန်းလင်းနိုင်မည်နည်း။ ဆန်းသစ်သောနည်းပညာသည် အမှန်တကယ် ဆန်းသစ်နေပါက၊ မည်ကဲ့သို့ […]
ဆက်ဖတ်ရန်... The Dazzling Solar Power of History မှ
နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုဒေတာ ဘာကြောင့် ထပ်မထည့်တာလဲ။
ကုန်သွယ်မှုစာရင်းအင်းများသည် တိကျနိုင်ပါသည်။ သို့သော် မည်သည့်ကုန်သွယ်မှုစာရင်းအင်းသည် အတိကျဆုံးဖြစ်သည်ကို မသိပါက၊ ဤဆောင်းပါးသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ မတူညီသောရင်းမြစ်များကြား ကွဲလွဲမှုများစွာရှိနေရသည့်အကြောင်းရင်းနှင့် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကို ဆွေးနွေးပါမည်။ […]
ဆက်ဖတ်ရန်... နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုဒေတာ ဘာကြောင့် ထပ်မထည့်တာလဲ။
၀ယ်လိုအားကို B2B စျေးကွက်များဖြင့် အသွင်ပြောင်းခြင်း။
၀ယ်လိုအားသည် နှစ်အတော်ကြာအောင် မပြောင်းလဲဘဲ ပြောင်းလဲနေပါသည်။ B2B စျေးကွက်များသည် ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရှာဖွေရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဝယ်သူ၏ မျှော်လင့်ချက်များသည် ပြောင်းလဲနေပြီး ၀ယ်လိုအားမှာလည်း ၎င်းတို့နှင့်အတူ ပြောင်းလဲနေသည်။ […]
ဆက်ဖတ်ရန်... B2B Marketplaces ဖြင့် ၀ယ်ယူမှုကို အသွင်ပြောင်းခြင်းမှ
B2B အရောင်းတွင် Omnichannel- ပုံမှန်အသစ်
Omnichannel သည် B2B အရောင်း၏အနာဂတ်ဖြစ်ပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့လို့ဖြေရင် သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်အသစ်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေသည်- Omnichannel သည် B2B အရောင်းအတွက် ဆက်ရှိနေရန်ဖြစ်သည်။ […]
ဆက်ဖတ်ရန်... B2B ရောင်းချမှုတွင် Omnichannel မှ- ပုံမှန်အသစ်
လေထုညစ်ညမ်းမှု: နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ mini-grid ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သတိမမူဘဲအရေးကြီးသောအချက်တစ်ခု
ကမ္ဘာကြီးသည်၎င်း၏နေရောင်ခြည်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံတပ်ဆင်မှုအခြေအနေကိုမြှင့်တင်နေစဉ်တွင်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုဒီဇိုင်းအဆင့်တွင်မကြာခဏလျစ်လျူရှုထားသည်။ မစ္စ Noor သည်လေထုညစ်ညမ်းမှုသည်နေရောင်ခြည်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်သည်ကိုရေးသားသည်။ MIT, Massachusetts Technology Institute (MIT) မှ MIT မှ Noor Titan Putri Hartono Postdoctoral တွဲဖက်မှ […]
ဆက်ဖတ်ရန်... လေထုညစ်ညမ်းမှုမှ- နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် လျစ်လျူရှုထားသော်လည်း အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်များ (SDGs) ရရှိရန်အင်ဒိုနီးရှားအတွက်ကာဗွန်အခွန်သည်အဖြေတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရသည်ကာဗွန်အခွန်သတ်မှတ်ပြီးကုမ္ပဏီများရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းတိုင်များ (SDGs) ရရှိရန်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချသောနည်းပညာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကုမ္ပဏီများအားတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ကာဗွန်အခွန်မှနေ၍ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းတိုင်များ (SDGs) ကိုရရှိရန် အင်ဒိုနီးရှားအတွက် အဖြေတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။
တရုတ်၏“ ရေမြှုပ်မြို့များစီမံကိန်း” သည်စိမ့်ဝင်နိုင်သောမျက်နှာပြင်များနှင့်အစိမ်းရောင်အခြေခံအဆောက်အအုံများကို အသုံးပြု၍ ရေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်အသုံးချသည်။ Asit K. Biswas ဂုဏ်ထူးဆောင်လာရောက်သောပါမောက္ခ၊ Lee Kuan Yew ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒကျောင်း၊ စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်၊ Kris Hartley ကထိက By City and Regional Planning, Cornell University [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... တရုတ်နိုင်ငံ၏ 'ရေမြှုပ်မြို့များ' မှ မိုးရေ 70% ကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် ရည်မှန်းထားသည် - ဤတွင် မည်သို့နည်း။
အလွတ်တန်းအလုပ်ဆိုတာတီဗီမှာပြသတဲ့စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီးကော်ဖီအားဖြည့်စက်မှုလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါ။ OECD နိုင်ငံများတွင် gig လုပ်သားအများစုသည် ၀ န်ဆောင်မှုကဏ္inတွင် […]
ဆက်ဖတ်ရန်... freelancing သည် အလုပ်အကိုင်၏ အနာဂတ်ဖြစ်ပါသလား။
ဤဆောင်းပါး၌ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ၊ အနုတ်လက္ခဏာထုတ်လွှတ်မှုများကိုမည်သို့လျှော့ချနိုင်သနည်း၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အောင်မြင်နိုင်သနည်းကိုဤဆောင်းပါးတွင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ဇီဝလောင်စာဆီ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မှုများမှ 'အနုတ်လက္ခဏာ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု' သည် ပိုမိုနီးကပ်လာစေသည်။
ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများအတွက်လျှပ်စစ်မီးပေးနိုင်ရန်အင်ဒိုနီးရှား၏ဆိုလာစွမ်းအင်အစီအစဉ်အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သောစိန်ခေါ်မှုများ၊ ဖြေရှင်းချက်များ၊ အရာများစွာကိုနေရောင်ခြည်မှအခွင့်ကောင်း ယူ၍ ဖြေရှင်းနည်းများကားအဘယ်နည်း။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်မှ ဝေးလံခေါင်သီသော ဒေသများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အဓိကကျသော အချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြတ်တောက်မှုသည်နေ့စဉ်ပုံမှန်ဖြစ်လာသောကြောင့်တရုတ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအချို့ကိုပိတ်ပစ်ရန်နှင့်အချို့ကိုတစ်ပတ် ၂-၄ ရက်လည်ပတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ တရုတ်၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအကျပ်အတည်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ Jaideep Singh Mann ၏အဆိုအရတရုတ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအချို့ကိုပိတ်ပစ်ရန်နှင့်အချို့မှာတစ်ပတ်လျှင် ၂-၄ ရက်လည်ပတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်... မှ ရှင်းလင်းချက်- တရုတ်နိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အကျပ်အတည်း။
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် Texas Instruments မှအသက် ၅၂ နှစ်အရွယ်အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိ Morris Chang သည်ကုမ္ပဏီ၏ထိပ်တန်းအလုပ်အတွက်အပယ်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီးကမ္ဘာ့မဟာဗျူဟာအရအရေးပါဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သော TSMC ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒါကသူ့ဇာတ်လမ်းပါ။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ကမ္ဘာ့အရေးအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ၏ ဇာတ်လမ်းနှင့် ၎င်း၏တည်ထောင်သူ Morris Chang
၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်အချက်အလက်မမှန်မှုများတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည်၎င်း၏လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ လုပ်ငန်းစီမံချက်သည်မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်၊ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ မှားသည်ကိုရှာဖွေပါ။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ 'Doing Business Report' ၏ မှေးမှိန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ
ဆက်ဖတ်ရန်... နျူကလီးယား ပေါင်းစပ်မှုတွင် ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုများမှ ကျွန်ုပ်တို့အား 'အနန္တ' စွမ်းအင်ဆီသို့ ခြေလှမ်းလှမ်းလာစေသည်။
ကျောက်မီးသွေးဈေးနှုန်းသည် ၂၀၂၁ တွင်တစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်ခဲ့သည်၊ အသားတင်သုညအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကာဗွန်ကြောက်စိတ်၏အောက်ခြေတွင် ၂၀၂၁ တွင်ကျောက်မီးသွေးစျေးနှုန်းသည်လွန်ခဲ့သော (၁၇၀ ဒေါ်လာ/မက်ထရစ်တစ်တန်) အထိမြင့်တက်သွားသောကြောင့်ကြီးမားသောအနက်ရောင်ပြဿနာတစ်ခု […]
ဆက်ဖတ်ရန်... ကျောက်မီးသွေးဈေးသည် 2021 ခုနှစ်တွင် မြင့်တက်လာခဲ့သည် - အသားတင် သုညအတွက် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
Covid-19 သည် B2B စျေးကွက်များအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်းခေါင်းဆောင်များမည်သို့တုံ့ပြန်ပုံ၊ B2B အရောင်းပုံစံနှင့် B2B အရောင်းလည်ပတ်မှုတို့သည်ကူးစက်ရောဂါမတိုင်မီထက်အနာဂတ်တွင်သိသိသာသာကွဲပြားလိမ့်မည်ကိုသင်သိရန်လိုသည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... B19B အရောင်းမော်ဒယ်များပေါ်တွင် Covid-2 ၏နောက်ဆုံးသက်ရောက်မှုမှ
စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဆိုတာဘာလဲ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတာဘာလဲ။ သူတို့ဘယ်လိုကွဲပြားသလဲ၊ သူတို့ကိုတိုင်းတာဖို့သတ်မှတ်ချက်တွေကဘာတွေလဲ။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြား ကွာခြားချက်နှင့် ၎င်းတို့ကို တိုင်းတာနည်း
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးထိခိုက်စေသောကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသောနေ့ရက်များကြားတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စီးပွားရေးပေါ်ပေါက်လာမှုသည်ယခုအခါဒေါ်လာ ၂,၀၆၄ မှ ၂,၂၂၇ သို့ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို ကယ်တင်ခြင်းဖြင့် တောင်အာရှတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စီးပွားရေး ပေါ်ပေါက်လာရေး ဆန္ဒပြမှုမှ၊
အင်ဒိုနီးရှား၏နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအကြောင်း၊ ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ဖက်များ၊ အင်ဒိုနီးရှားသွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်ထိပ်တန်းကုန်စည်များ၊ အင်ဒိုနီးရှား၏ကုန်သွယ်ရေးပိုငွေနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ကုန်သွယ်မှုလိုငွေနှင့်အခြားအရာများအကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ [... ]
လွန်ခဲ့သောနှစ် ၁၀၀ အတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေမညီမျှမှုတိုးပွားလာသလား။
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၁၀၀ အတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေဖြန့်ဝေမှုတွင်အရေးပါသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာမီအနာဂတ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ငွေမညီမျှမှုကိုအဆုံးသတ်ရန် ဦး တည်နေကြောင်းပြသနေသည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း 100 အတွင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀င်ငွေမညီမျှမှုမှ တိုးလာပါသလား။
နိုင်ငံနှင့်လူသားများ၏အခြေခံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်စက်မှုတော်လှန်ရေးမှ စ၍ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာစွမ်းအင်များဖြင့်မောင်းနှင်လျက်ရှိသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်ဆိုးရွားလှသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုပျက်စီးစေသည်၊ မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောရေကြီးမှုများ (သို့) မီးလောင်ကျွမ်းမှုများ (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့များသည်နေထိုင်ရန်မသင့်လျော်ဟုရိုးရှင်းသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... Irony Of Solving Global Energy ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှ
လူ ဦး ရေ ၇၈၅ သန်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ရေသန့်သောက်သုံးရန်မတတ်နိုင်ကြပါ
လူသားများသည်အစားအစာမပါဘဲ ၃ ပတ်ရှင်သန်နိုင်သော်လည်းရေမပါဘဲ ၃ ရက်မှ ၄ ရက်အထိအသက်ရှင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသောရေသည်ဘဝ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောသန့်ရှင်းသောရေရာခိုင်နှုန်းသည်၎င်း၏ညစ်ညမ်းမှုများကြောင့်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့အကြီးအကျယ်ကျဆင်းနေသည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... 785 ခုနှစ်တွင် လူပေါင်း 2021 သန်းမှ လုံခြုံသော သောက်သုံးရေကို သုံးစွဲခွင့် မရနိုင်ပါ။
အိန္ဒိယ 2021 ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကိုယ်ရေးဖိုင်
အိန္ဒိယ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှု၊ ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ဖက်များ၊ အိန္ဒိယ၏သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်ထိပ်တန်းကုန်ပစ္စည်းများ၊ အိန္ဒိယကုန်သွယ်ရေးပိုလျှံမှုနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ကုန်သွယ်မှုလိုငွေပြမှုစသည်တို့ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... အိန္ဒိယ 2021 နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုပရိုဖိုင်မှ
Tesla သည်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း EVs ထုတ်လုပ်သူများအိန္ဒိယသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ကျွမ်းကျင်သူတွေကထင်မြင်ချက်တွေထက်ပိုပြီးဖောင်းပွမှုပိုရှိမယ်လို့ထင်နေကြတယ်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... Tesla အတွက် အိန္ဒိယက အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
ယနေ့တရုတ်နိုင်ငံသည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင်အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့၏မူဝါဒများကသူတို့ကိုကျော်တက်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးတွင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသောဘုရင်တစ်ပါးအဖြစ်အုပ်စိုးရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ နီကိုလိုနီဝါဒဆိုတာဘာလဲ။ ကိုလိုနီစနစ်သည်အာဏာတစ်ခုသို့မဟုတ်လူတစ်စုမှအခြားအာဏာကိုထိန်းချုပ်သောအခါ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... စီးပွားရေးကိုလိုနီလက်သစ်အာဏာရှင်အဖြစ် တရုတ်ထမြောက်လာပြီး အိန္ဒိယသည် ကိုလိုနီနယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်သော“ ညစ်ပတ်သုံးဆယ်” သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံကျော်လွန်သည်
ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏ငွေကြေးထောက်ပံ့သူများကိုပါရီသဘောတူစာချုပ်အပြီး၌ပင်ကျောက်မီးသွေးလုပ်ငန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာနှေးကွေးခြင်းမရှိသေးပါ။ Aks Kuldeep Singh မှကြီးမားသောလုပ်ငန်းစုကြီးများသည်ပါရီသဘောတူစာချုပ်အပြီး၌ပင်ကျောက်မီးသွေးကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့နေသည်။ အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်စျေးပေါအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များမှာ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ၏ “ညစ်ပတ်သုံးဆယ်” မှ ကျောက်မီးသွေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် 1 ခုနှစ်တွင် $2021 Trillion ကျော်သွားသည်
ဂလိုဘယ်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြတ်တောက်ခြင်း၊ နယ်နိမိတ်ပိတ်ဆို့မှုများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးပconflictsိပက္ခများသည်နိုင်ငံများအတွင်းသို့အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအဆက်ပြတ်နေသည်။ သို့သော် Princeton မှ Harold James က Covid-19 သည်ငါတို့အားလုံးကိုပိုမိုနီးကပ်စွာတွန်းအားပေးနိုင်သည်ဟုထင်မြင်သည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ဂျကာတာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလျင်မြန်ဆုံး နစ်မြုပ်နေသောမြို့ဖြစ်လာစေရန် လူတို့ပြုလုပ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များမှ ဖြစ်သည်။
Michel Noussan မှ Pier Paolo Raimondi Rossana မှ Scita Manfred Hafner Fondazione Eni Enrico Mattei၊ Corso Magenta 63, 20123 Milano, Italy Abstract Hydrogen သည်အမျိုးသားနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာသီဥတုဗျူဟာများစွာတွင်အသစ်ပြန်လည်နှင့်ကျယ်ပြန့်သောအရှိန်အဟုန်ကိုခံစားနေရသည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းသည်အစိမ်းရောင်နှင့် [... ] နှင့်ဆက်စပ်သောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အာရုံစိုက်သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်... လောင်စာ၏အနာဂတ်အဖြစ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ အခန်းကဏ္ဍအကြောင်း သင်သိလိုသမျှထဲမှ
ထိုကုန်ထုတ်စွမ်းအားကသက်သေပြသောဇယား ၂ ခုသည်နိုင်ငံ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုတွန်းအားပေးသည်
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားသည်သင်အရင်ကမလုပ်နိုင်ခဲ့သည့်အရာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာ Franz Kafka - ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာကုန်ထုတ်စွမ်းအား - အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှရလဒ်ဤအမြင်အာရုံသည်တစ်နာရီလျှင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်အားထုတ်လုပ်မှုကိုပြသသည်။ မြေပုံမြင်ကွင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်နိုင်ငံများအကြားကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသသည်။ အလုပ်လူတစ် ဦး စီအတွက်အမှန်တကယ်ဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်း [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည် နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို တွန်းအားပေးကြောင်း သက်သေပြသည့် ဇယား ၂ ခုမှ
Burgernomics - Big Mac အညွှန်းကိန်း
Big Mac အညွှန်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့် Big Mac ၏ဒေါ်လာ ၅၀ တန်တန်ဖိုးသည်မတူညီသောနိုင်ငံများတွင်ဖြစ်သည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... Burgernomics – The Big Mac Index မှ
အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောယေဘူယျယူဆချက်များသည်ခေတ်နောက်ကျနေသည်။ ယခုတည်ဆောက်လျက်ရှိသောစွမ်းအင်စနစ်အသစ်သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒဏ္sာရီများကိုငြိမ်သက်စွာထားလေလေ၊ ပိုကောင်းလေလေဖြစ်သည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်မှ- ဘုံဒဏ္ဍာရီများကို ဖယ်ရှားထားသည်။
Bezos နှင့် Amazon တို့သည်လက်လီလောကကိုမည်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သနည်း
ယနေ့အမေဇုံသည်တတိယတန်ဖိုးအရှိဆုံးအမေရိကန်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၇ ထရီလီယံခန့်ရှိသည်။ နိုင်ငံအားလုံး၏ဂျီဒီပီထက်တစ်ဒါဇင်ခန့်သာရှိသည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... Bezos နှင့် Amazon တို့မှ လက်လီလောကကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
တရုတ်သည်နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီပါကနိုင်ငံတကာစနစ်အတွင်းသဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်ဟန်ချက်ညီမှုရရှိစေရန်အတွက်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏သီလများကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖော်ထုတ်နိုင်ပါသလား။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... တရုတ်နိုင်ငံမှ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ ချန်ပီယံအသစ်ဖြစ်ပါသလား။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း - ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂြိုလ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုကြေငြာပြီးပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောနေထိုင်မှုကိုစတင်နိုင်ခဲ့လျှင်ပင်ကမ္ဘာမြေပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ရာစုနှစ်များစွာမဟုတ်ဘဲရာစုနှစ်များစွာကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းမှ- 2021 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ကြပါစို့
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုကာကွယ်ဆေးမထိုးသည့်စီးပွားရေးတန်ဖိုး ၄ ထရီလီယံ
၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင်ပိုမိုချမ်းသာသောနိုင်ငံများကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသည်လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်ကိုသာကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်လျှင်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ထရီလီယံဖြစ်သည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့ စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်4ထရီလီယံကနေ
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ နီးပါးကစတင်ခဲ့သည်!
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ၏ဆွဲဆောင်နိုင်မှုသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကုန်သွယ်မှုနှင့်နေရာအနှံ့အပြားမှလူများအကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်... ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 1,000 နီးပါးက စတင်ခဲ့တာလား။
အင်ဒိုနီးရှားသည် ၂၀၄၀ တွင်အီလက်ထရောနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ ဘီလီယံရရှိနိုင်သည်
အင်ဒိုနီးရှား၊ စတုတ္ထမြောက်လူ ဦး ရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ၂၀၄၀ တွင် အင်ဒိုနီးရှားမှ အီးအမှိုက်မှ ကန်ဒေါ်လာ ၁၄ ဘီလီယံ ရရှိနိုင်သည်။
Covid-19 ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ၄.၀ မြင့်တက်လာသူများ
Covid-19 စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းနှင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ၄.၀ မွေးဖွားမှုအတွက် Global Value Chains ပြောင်းလဲမှုများကိုကြည့်ပါ။ မည်သည့်နိုင်ငံများကအလားအလာကောင်းများရနိုင်ပြီးမည်သည့်အရာကသူတို့ကိုတားဆီးနိုင်မည်နည်း။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... Covid-19 လွန်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှင့် ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း 4.0 တွင် အောင်ပွဲခံသူများထံမှ
တံခါးပိတ်နယ်နိမိတ်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးပconflictsိပက္ခများနှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ပြnationsနာများသည်နိုင်ငံများအတွင်းသို့အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအဆက်ပြတ်နေသည်။ [... ]
ဆက်ဖတ်ရန်... ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု အရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာခြင်းမှ
ဆက်ဖတ်ရန်... Covid-19 ကပ်ရောဂါကနေ စီးပွားရေးကို ဂလိုဘယ်ကို ပိုလို့တောင် လွှမ်းမိုးနိုင်သလဲ၊ မနည်းပါဘူး။
upload ကိုဤtoရိယာသို့ကလစ်နှိပ်ပါသို့မဟုတ်ဆွဲယူပါ။ဖိုင် ၆ ခုအထိတင်နိုင်သည်။